Kooxda Juventus oo go’aamisay wararka ku aadan in Paul Pogba uu markale dib ugu soo laaban doono Bianconeri – Gool FM
(Juventus) 09 Okt 2018. Agaasimaha ciyaaraha ee kooxda Juventus Fabio Paratici ayaa wuxuu ka warbixiyay xaqiiqada ku aadan in laacibka khadka dhexe ee Manchester United Paul Pogba uu dib ugu soo laaban doono Bianconeri.
Paul Pogba ayaa xiliyadii lasoo dhaafay oo idil lala xiriirinayay in markale uu dib ugu soo laaban doono garoonka Allianz Stadium, kadib khilaaf xoogan ee soo kala dhex galay isaga iyo tababare José Mourinho.
Laakiin Fabio Paratici ayaa wareysi uu dhawaan ku bixiyay warsidaha “Football Italy” wuxuu si cad ugu sheegay inaysan xiligan dooneynin dib u soo celinta Paul Pogba.
“Waxaan jecelnahay Paul Pogba in badan, waan la xiriiraa si gaar ah aniga, laakiin kuma fikirin in xiligan aan dib ugu soo celino Allianz Stadium”.
Fabio Paratici ayaa wuxuu dhinaca kale carabka ku adkeeyay in Juventus ay sii ahaan doonto mid jecel xidiga reer France, laakiin aysan jirin wax dalab rasmi ah ay ku doonayaan dib u soo celintiisa.
Si kastaba Pogba ayaa wuxuu haatan ku qaadanayaa waqti aad u adag kooxda reer England ee Red Devils, sababa la xiriira khilaaf xoogan ee kala dhexeeya tababare José Mourinho.
Sidoo kale magaca Paul Pogba ayaa xiliyadii lasoo dhaafay lala xiriirinayay u dhaqaaqista kooxda horyaalka La Liga ee Barcelona, ama kooxdiisii hore ee Bianconeri.